China PUR na-ekpo ọkụ gbazee nrapado laminating igwe TH-101B Manufacture and Factory | Kangpa
Newslọ Ọrụ Akụkọ
PUR na-ekpo ọkụ gbazee nrapado lamin ...
Ọnya mbukota Hydraulic P ...
Magnetik ntụ ntụ breeki
PUR ọkụ gbazee nrapado laminating igwe TH-101B
1. Automatic onu itinye n'ọnọdụ usoro, akpaka itinye n'ọnọdụ, mbenata ọrụ.
2. Erughị ala unwinding ngwaọrụ, dịghị ndọlị, mbenata oru osisi ike.
3. Ruo 80 m / min, mmepụta ngwa ngwa, enweghị ihicha.
Ngwaọrụ igwe: X-TH101B
Igwe akụkụ: ogologo * obosara a * elu / 4080mm * 3000mm * 2200mm
Obosara nke machinable ihe: 1800mm
Arụpụta: 0 ~ 40m / min
Voltaji: 380V / AC
Usoro kpo oku: Igwe ọkụ eletrik
Abịa ngwa: 200L Sol igwe
Gluing usoro: mama ebe nyefe nke mama ala
Ike mbanye: AC agbanwe ugboro stepless ọsọ ụkpụrụ
Usoro njikwa: PLC interface
Igwe igwe: 5800kg
Mechanical color: anya-acha ọcha, Chinese-acha uhie uhie
Onye Ọrụ: 2 ~ 8
Industlọ ọrụ Ngwa:
Uwe ala, akwa uwe na ihe ndị ọzọ na-agbanwe.
4. PUR na-ekpo ọkụ gbazee ogige igwe akụrụngwa njikwa adopts programmable PLC imewe na nwoke-igwe interface njikwa, humanized ọrụ na mfe mmezi.
5. Na ikpo ọkụ na-enyefe mmanụ ọkụ ọkụ na-ekesa usoro, ọ dị mma iji chịkwaa ịrị elu okpomọkụ na ọdịda na nkwụsi ike nke gluu.
6. Laminating ihe na okokụre ngwaahịa nwere ike ịmụta center coiling ma ọ bụ n'elu nhọrọ ụzọ dị ka achọrọ.
7. E kewara usoro gluing n'ime nhọrọ abụọ: ikesa na mkpuchi zuru ezu.
Ntughari maka PUR na-agbaze agbaze nrapado agwakọta:
Ndị ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ akụrụngwa a naanị mgbe ha matachara arụmọrụ igwe yana ụkpụrụ ọrụ. Ngwa ndị a ga - arụrịrị ọrụ site n'aka onye raara onwe ya nye, ndị ọrụ na - adịghị arụ ọrụ enweghị ike imeghe ma ọ bụ megharịa na enweghị usoro.
Tupu imepụta, chọpụta ma ngwa eletriki ndị dị ka eriri, ndị na-emebi sekit, kọntaktị, na motọ zutere ihe achọrọ.
Tupu imepụta, lelee ma ike ọkụ nke atọ agaghị edozi. A machibidoro ya iwu ịmalite akụrụngwa na-enweghị usoro.
N'oge oge mmepụta, lelee ma nkwonkwo rotary ọ bụla dị mma, ma ọkpọkọ pipeline ahụ, ma enwere mmebi ọ bụla, ma ọ bụ mwepụ mmanụ, ma wepu ya n'oge.
Ekwesịrị ịgbanye igwe mmanụ na-ekpo ọkụ tupu imepụta ya, yana enwere ike mepụta ya naanị mgbe okpomọkụ rịrị elu na ọnọdụ okpomọkụ nke usoro ahụ chọrọ. Tupu mmepụta, lelee ma nrụgide nke baromita ọ bụla dị mma, ma enwere mmiri ọ bụla na ụzọ gas, ma mezie ya n'oge.
Tupu imepụta, lelee njikọta njikọ ọ bụla iji hụ ma ọ dị ịghapụ ma ọ bụ daa, ma mezie ya n'oge.
Tupu imepụta akụrụngwa akụrụngwa, obere nnwale ga-ebu ụzọ mee, ma nwee ike rụpụta ọtụtụ ihe naanị mgbe emesịrị.
Tupu imepụta ya, lelee ọnọdụ mmanu nke ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche, ndị na-ebelata, na-ebu ohia, kposara kedu, wdg, ma jupụta mmanụ mmanụ na mmanụ mmanu n'ụzọ ziri ezi na n'oge.
Mgbe akụrụngwa ahụ kwụsịrị, a ga-ehichapụ tankị gluu, ngwa ngwa mpịakọta, na anilox roller n'oge iji wepu mkpofu fọdụrụ na unyi n'akụkụ niile nke igwe ahụ maka ojiji ọzọ.
Ọ na-machibidoro ịkpọtụrụ corrosive liquids na roba rollers, na mgbe nile hụ na elu nke ọ bụla mbanye ala dị ọcha na-enweghị ihe mba ọzọ.
A machibidoro ya iwu ikpokọta ihe mkpofu gburugburu igwe mmanụ na-ekpo ọkụ, ma debe igwe mmanụ na-ekpo ọkụ na gburugburu ya ọcha na enweghị ihe ndị si mba ọzọ oge niile. Mgbe igwe mmanụ na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ, amachibidoro ya imetụ ọkpọ mmanụ na-ebuga ya aka.
Nke gara aga: Magnetik ntụ ntụ breeki
Osote: Afọ mbukota Hydraulic Press
Automatic Hot gbazee mama mama Laminating Machine
Hot agbaze agbapụta Equipment
Hot gbazee Film Laminating Machine
Hot gbazee ụfụfụ Laminating Machine
Hot gbazee gluu Ngwa
Hot gbazee mama mama Laminating Machine N'ihi Uwe
Hot gbazee mama mama Laminating Machine N'ihi Textile
Hot gbazee mama mama Laminating Machine na Ce Asambodo
Hot gbazee mama mama ngwa
Hot Agbaze Laminating Machine
Hot gbazee Lamination
Hot gbazee Lamination Machine
Hot gbazee Lamination Usoro
Hot gbazee Pur Laminating Machine
Pur Hot gbazee nrapado Laminating Machine
Pur Hot gbazee gluu Nonwoven Laminating Machine
Pur Hot gbazee Laminating Machine N'ihi uwe
Pur Hot gbazee Laminating Machines
Igwe mkpirisi hydraulic nke anọ
Mpaghara A, 5th Floor, Kaku Shangzhong Gaocheng, Nke 77 West Tailong Nitou Road, Shatian Town, Dongguan City
Hot gbazee mama mama Laminating Machine na Ce Asambodo, Pur Hot gbazee gluu Nonwoven Laminating Machine, Hot gbazee mama mama Laminating Machine N'ihi Uwe, Hot gbazee gluu Ngwa, Automatic Hot gbazee mama mama Laminating Machine, Pur Hot gbazee nrapado Laminating Machine,